Ubuzwe baseMontenegro besabelo seDurmitor Hotel & Villas
Ukutshalwa kwezimali eHhotela + Ubuzwe baseMontenegro
Enhliziyweni yepaki kazwelonke enhle kunazo zonke yaseMontenegro, iDurmitor National Park, eduze neBlack Lake (eCrno Jezero),
IDurmitor Hotel & Villas isiqalile ukwakha indawo yokubhuka ekhethekile eneDurmitor Hotel namaphethelo.
Ihhotela elisha iDurmitor kuzoba yihhotela lezinkanyezi ezinhlanu lokuqala eZabljak, elizolekelela kakhulu ukunikezwa kwabavakashi kwezifunda ezinezintaba.
Ingaphandle lehhotela lizofana nehhotela elidala laseDurmitor, okwakuwuphawu lokuvakasha kwezintaba eMontenegro.
kusukela ngo-1939, ngakho-ke izonikeza izivakashi zayo isimo sangempela sezintaba, kanye nobuciko nokunethezeka.
Ihhotela lizoba namafulethi kanokusho angama-55, izindawo zokudlela ezi-2, indawo yokuphilisa nendawo yokuthokomela, amachibi angaphakathi nangaphandle, igumbi lokudlala lezingane, igumbi lomhlangano negumbi lomhlangano.
Futhi endaweni eseduze yaleli hhotela kuzokwakhiwa izindlu zezindlu zezintaba eziyi-13, ezizophinde zikhanye ngobukhazikhazi bezinkanyezi ezi-5.
Okuhehayo okuyingqayizivele kwendawo yokuvakasha yindawo lapho itholakala khona, eyaziwa ngobuhle bayo bemvelo obungavamile obungeke bushiye noma ngubani engenandaba.
Izivakashi zalesi siqhingi zizozithola zisendaweni efanele yokuzijabulisa kwezintaba, kepha uma zifuna ukuphumula, zizoba sendaweni efanelekile ukunqamula ekuxakekeni kwempilo yansuku zonke, zithathe ikhefu empilweni esheshayo futhi jabulela ukuthula nokuzola kwemvelo.
IDurmitor Hotel itholakala enyakatho yeMontenegro edolobheni laseZabljak (idolobha elinokuphakama okuphezulu kakhulu eBalkans, endaweni ephakeme ngamamitha ayi-1450 ngaphezu kolwandle) futhi uhamba imizuzu engaba yishumi usuka echibini elihle kakhulu
IDurmitor National Park - iBlack Lake (iCrno Jezero).
Umgwaqo u-E65 wumgwaqo oxhuma iZabljak nayo yonke iMontenegro futhi ungumgwaqo omkhulu ohlanganisa ugu lwaseMontenegro, iPodgorica nenyakatho.
Olunye uxhumano lwezokuthutha olubalulekile ngumgwaqo odlula eShavnik naseNicsic uye eRisan noma ePodgorica.
Idolobha libuye libe nesikhumulo sezindiza sedolobha (isikhumulo sezindiza i-Zabljak), kepha izikhumulo zezindiza zomhlaba wonke eziseduze yilezi:
Isikhumulo sezindiza iPodgorica siqhele nge-130 km. Kukhona izindiza ezijwayelekile ezivela kulesi sikhumulo kulo lonke elaseYurophu.
Isikhumulo sezindiza iTivat yisikhumulo sezindiza esiseduzane sesibili futhi siqhele ngamakhilomitha angu-170 - amahora amathathu nohhafu ngemoto.
Lolu hlelo lwenzelwe iminyaka engu-3, ​​kanti kuhlelwe abafakizicelo abangama-2000.
Uma kubhekwa ukuthi ukwakhiwa kwehhotela iDurmitor kanye nezindawo zokuhlala eziseduze kungutshalomali enyakatho yezwe, izidingo zikahulumeni ukukhokha
inani lama-euro ayi-100 wokuthuthukisa + utshalomali lwama-000 euros (intengo ifaka i-VAT).
Ngaphezu kwalokho, umfakisicelo kumele akhokhe:
Ama-euro ayi-15000 wohlelo lokusebenza lomuntu siqu,
€ 10 yelungu lomndeni elengeziwe kanye namalungu omndeni angafika amane, futhi
Ama-euro angama-50 kwilungu ngalinye lomndeni elilandelayo.
Izizathu zokuthi kungani kufanele ufake isicelo sepasipoti yaseMontenegro:
Ubuzwe butholwa kungakapheli izinyanga eziyi-6.
Izingane ezincane nazo zingafaka isicelo nomfakisicelo omkhulu.
Umfakisicelo akudingeki alahle ubuzwe bakhe njengamanje.
Ukungena kwamahhala ngaphandle kwe-visa emazweni we-123.
Indawo enenzuzo kakhulu yezwe.
Indawo ekahle yokuhlala.
Eminye yemibhalo eyisisekelo edingekayo kuhlelo lokusebenza:
Isitifiketi esingenalo irekhodi lobugebengu;
Izitatimende ze-akhawunti yasebhange;
Idatha yomuntu siqu nokuqhubeka komuntu siqu okufushane;
Isivumelwano sokutshala imali.